Koorsooyin AutoCAD 3D oo bilaash ah - Revit - Microstation V8i 3D - Geofumadas
Ogast, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Maanta oo internetka la joogo, waxbarashadu mar dambe cudurdaar ma noqonayso. Markaad ogaatid algorithms-yadaas aadan waligaa ogayn inay jireen dhisida Rubik's cube ee dugsiga sare si aad uhesho koorsooyin AutoCAD bilaash ah khadka tooska ah.
Waxaan ka warqabnaa in mustaqbalka CAD uu ku jiro qaabeynta loo yaqaan BIM. Farqiga wuxuu kujiraa qaadashada teknoolojiyada qaabeynta kaabayaasha.
Markii hore, CAD waxay rabtay inay sameyso wixii horeyba loogu sameyn jiray warqad iyo qalin. Taasi waa sababta amarradu isugu dayeen inay ku soo celiyaan wixii aan ku samaynay qalab gacmeed (tirtire, jajab, taliyayaal, arrimo, iwm). Sidan oo kale qorshayaashii dhismuhu u baahnaa ayaa la sawiray, qorshooyin wax dhisaya iyo goos goos goos goos ah, iyadoo si xoog leh loogu adeegsaday naqshadeynta dhismaha iyo dhismihii xigay; markaa ereyga AEC.
Laakiin isbeddelka soo socdaa wuxuu ahaa qaabeynta 3D. Markaa in diyaaradihii goynta ay si otomaatig ah oo firfircoon ula soo baxeen; Tan waxaa lagu gaadhay kaliya haddii shaqadu xoogga saarto samaynta walxaha dhabta ah oo aan ahayn khadadka matalaya. Tani waa sida fikradda BIM ay u soo ifbaxdo, iyadoo la doonayo in la jaangooyo habka wax loogu yeero jilitaanka, kaliya maahan qaab dhismeedka, injineernimada iyo dhismaha laakiin sidoo kale howlgalka xiga (AECO).
Tani, heerar kala duwan; AutoDesk, Bentley, Solidworks, Wiyil si aad u siiso tusaalooyin. Dhammaantood waxay raadinayaan inay dhexgalaan maaddooyinka kala duwan ee wareegga kaabayaasha; injineerada makaanikada, koronto yaqaan, sahamiyayaal, injineerada qaab dhismeedka, nashqadeeyayaasha ... oo la mid ah wixii aan ku sameyn jirnay warqadda, laakiin hadda moodooyinka dijitaalka ah.
Barashada isticmaalka qalabkaan waxay ku xirantahay qof kasta oo isticmaala, ama in la dhiso, la arko ama la dhiso; iyo ka jawaabista dhowr qof oo codsaday gargaar, halkan waxaan ka tagayaa xiriirka koorsooyinka ujeedkoodu yahay BIM ee bixiya Xirfadaha Infinite.
Xirfadaha Infinite iyo koorsooyinka AutoCAD 3D oo bilaash ah
Bixinta qalabka lacag la'aanta ah ee ay bixiso boggan waxaa ku jira ku dhawaad ​​video 900 oo ka mid ah 2010 ilaa 2014 qaybaha barnaamijyada soo socda:
Dib u dhig MEP
Dhismaha Casriga ah
Dib u soo Celinta Qaabdhismeedka
AutoCAD Waraaqaha Qaybaha
Intaa waxaa dheer, koorsooyinka waxaa sidoo kale laga iibsan karaa DVD si loogu helo boosta caadiga ah.
Waxay ku qoran yihiin Ingiriis, laakiin haddii qof raadinayo koorsooyin bilaash ah oo ah AutoCAD, Microstation V8i 3D ama Revit ... kani waa meesha.
Xirfadaha khafiifka ah Koorasyada Free AutoCAD 3D
Post Previous" Hore Isbarbardhiga GPS - Leica, Magellan, Trimble iyo Topcon
Post Next Diiwaangelinta Toddobaadka MundoGEO Webinar ayaa furanNext »
22 Jawaab ah "Koorsooyin AutoCAD 3D oo Bilaash ah - Revit - Microstation V8i 3D"
arlind isagu wuxuu leeyahay:
Wixii xiiso leh ee barnaamijka dib u noqoshada, sheyga macaamiisha
samee isha mirenjohes
Hallo. Ka furfuran bogga internetka, waxaad la kulantay betaalbare prijzen.
i isagu wuxuu leeyahay:
Kaas oo ah kii ugu horreeyey ee addoonkaaga ku shaqeeya oo inaga samatabbixiya
Dhiirigelinta, Interesohem kasta ee kursi e Revit?
Xarunta Sudhir isagu wuxuu leeyahay:
Eric garcia isagu wuxuu leeyahay:
Hello, habeenkii wanaagsan, waxaan xiiseynayaa in aan qaato koorsada MicroStation sida aan u qaadan karo ama meesha, mahad Eric
Alba isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan hayo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka microstation-ka
riix isagu wuxuu leeyahay:
Waa hagaagaa adeerkiis ostia.
JOVI_81 isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan ka helaa koorsooyinka aad u xiiso badan. Waan jeclaan lahaa haddii aad u dirto boostada. Mahadsanid!
Annagu uma adeegno koorso Microstation ah. Waxaan qormadan qori karnaa.
Gerardo Sánchez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa inaan qaato koorsada Microstation V8i 3
Miyaad i siin kartaa warar?
iscoatl isagu wuxuu leeyahay:
hello q habeenki haboon mahadnaq goobtan Waxaan aad u xiiseynayaa koorsada microstation Waxaan rajeynayaa inaad iga caawin kartid
ivan carawi bravo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ogaado sida loo diiwaan geliyo koorsada degdegga ah ee microstation iyo software-ka, laakiin macaamiishii ugu horreysii !!! Sabab kasta ha noqotee ama faallooyinka kaalmada si fiican ayaa loo helaa oo noqon doona adeegga dadweynaha. Waad ku mahadsantahay horay.
melva atencio isagu wuxuu leeyahay:
Fiiri mid wanaagsan, xiiso leh oo aad waxtar u leh kuweena u baahan shaqadeena maalinlaha ah, fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan ku diro emailkeyga Fadlan….
Luis Tunjano isagu wuxuu leeyahay:
Koorsada otocad waa waxtar badan ... mahadsanid
Francisco abel paulino isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku raaxeysto qalabkan, aad ayaad u mahadsantahay
JUAN RAMON PILA isagu wuxuu leeyahay:
Waxyaabo aad u fiican, haddii ay suurtogal tahay waan ku faraxsanahay inaan u diro boostada
ROBERTO HERRERA isagu wuxuu leeyahay:
FADLAN KALA DUWAN MAGAALADA SANTA CUSUB, BIISKA IYO DHIBAATOOYINKA
Hello, koorsadu waxay u muuqataa mid weyn, fadlan iigu soo dir email ahaan.
Maaddooyin aad u wanaagsan ayaan jeclaan lahaa inaan ku diro boostada.
Hector waxuu tuuraa isagu wuxuu leeyahay:
Kala soocid koorasyo ​​lacag la'aan ah oo aad u xiiso badan u mahadnaqa inaad u dirto boosteejahayga